El elephants, esivela kumbindi we-Afrika, yintlanzi enomdla, ngokwasemzimbeni kunye nemikhwa eyahlukileyo evela kwezinye iintlanzi ezikwi-aquarium.
Le ntlanzi, enobude obumalunga neesentimitha ezingama-20 ubude, ngu Iintlanzi ezinempumlo emile okwe trunk, njengaleyo yendlovu, yiyo loo nto igama layo.
Nangona kunjalo, nangona isiqu sayo siluphawu lwayo oluphambili, ikwanemikhwa yasebusuku eyenza yahluke kulo naluphi na olunye uhlobo lwentlanzi. Indlovu yentlanzi, emini, ikhetha ukufihlwa ukunqanda ukudibana nezinye iintlobo zasemanzini, ngelixa ebusuku ihamba nge-aquarium kwaye ikhangela ukutya kwayo. Kungenxa yesi sizathu le nto kufuneka sizame ukondla esi silwanyana ngexesha lobusuku, nokuba kukutya okomileyo okhethekileyo kwintlanzi, okanye ukutya okuphilayo.
Njengeendlovu, le ntlanzi incinci iyacotha ukondla, ke ngoko sicebisa ukuba ungabinazo iintlanzi ezikhawulezayo nezikhohlakeleyo njengamaqabane akho echibini, kuba banokukuba ukutya kwakho kwaye bashiye isilwanyana sethu ngaphandle kokutya.
Nangona oku Iintlobo zasemanzini zineentloniBavame ukuba yindawo enkulu. Ngesi sizathu kubalulekile ukuba unayo kwi-aquarium enkulu ngokwaneleyo, okanye ubuncinci ngaphezulu okanye ngaphantsi kweelitha ezingama-200. Ngendlela efanayo, njengoko ezi ntlanzi zinxibelelana nezo zohlobo olufanayo ngokusebenzisa izothuso zombane, ukuba i-aquarium incinci, izothuso zinokuphazamisa ezinye iintlanzi ezihlala nayo.
Gcina ukhumbula ukuba ukugcina iintlanzi zendlovu zikwimeko efanelekileyo kufuneka ube ne-aquarium enezityalo ezininzi ukuze isilwanyana sizifihle apho emini, kwaye sigcine ubushushu bamanzi phakathi kwama-23 nama-28 degrees ngokukaCelsius.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Elephants
Ndiyaqonda ukuba eyokuqala yimontage?